“Cristaino Ronaldo wuxuu awoodaa inuu xaliyo 100 dhibaato ee kooxda Juventus ah” – Maurizio Sarri – Gool FM
“Cristaino Ronaldo wuxuu awoodaa inuu xaliyo 100 dhibaato ee kooxda Juventus ah” – Maurizio Sarri
Dajiye January 20, 2020
(Turin) 20 Jan 2020. Macalinka kooxda kubadda cagta Juventus ee Maurizio Sarri ayaa sheegay in weeraryahankiisa reer Portugal ee Cristaino Ronaldo uu awood u leeyahay inuu xaliyo 100 dhibaato ee kooxda Juventus ah.
Cristiano Ronaldo ayaa xalay guul ku hoggaamiyay kooxdiisa Juventus kaddib markii ay kaga adkaadeen kooxda Parma 2-1, xilli labada goolba uu isaga dhaliyay, kulan ka tirsanaa horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga.
Laakiin macalinka reer Talyaani ee Maurizio Sarri ayaa u muuqda midaan ku faraxsaneyn qaab ciyaareedka kooxdiia Juventus ay ku hor sameysay xalay naadiga Parma, in kastoo ay ka heleen saddexda dhibcood, waxayna haatan 4 dhibcood kaga hoggaaminayaan InterMilan.
Haddaba Maurizio Sarri ayaa kaddib ciyaarta wuxuu la hadlay shabakada “Sky Sport” wuxuuna yiri:
“Waxaa jiray xoogaa farqiyo ah oo noo dhexeeya annaga iyo iyaga, laakiin guud ahaan waxaan isku dayeynaa inaan horumar sameyno”
“Waxaa helnay fursado dhowr ah oo aan ciyaarta ku dhammeyn karnay xilli hore laakiin sidaas ma aanan sameynin, waana wax iska caadi ah in Parma ay dhibaatooyin nagu sameyso”.
Intaas kaddib Maurizio Sarri ayaa wuxuu ka hadlay bandhigii uu xalay sameeyay Cristaino Ronaldo iyo haddii uu kooxdiisa ku heysto xiddig isaga la mid ah wuxuuna yiri:
“Marka aad haysato xiddig heer caalami ah sida Cristiano Ronaldo, tani waxay kuu horseedi kartaa dhibaatooyin qaar ee waqti ka waqti ah, laakiin wuxuu xalin karaa isaga 100 dhibaato, marka waa inaad had iyo jeer qaadataa astaamihiisa, si aad ugu xisaabtanto ciyaarta”.
Roy Keane oo weerar culus ku qaaday Anthony Martial kaddib guuldarradii xalay ee Liverpool